Ukuphindaphindwa kwe-GIS-Iphepha 2 -Geofumadas
I-CAD, i-GIS, okanye zombini?
… Ukuthengisa amandla okwenza isoftware yasimahla kunzima ngakumbi kunokuqinisekisa igosa ukuba lenze ityala lolwaphulo-mthetho (ubugebenga), ke ayenzi software ebiza kakhulu. Kutshanje iBentley isungule iphulo lokukhuthaza iMephu yeBentley, isebenzisa njengengxoxo yokuba akukho mfuneko yokuba ucinge ngokwahlukeneyo ukuba zombini ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems 3D civil ESRI Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Geospatial - GIS, GIS asibonise, Microstation-Bentley
Ngeke kubekho i-ArcGIS 9.4
Kwenye yokuqikelela kwam okuphambeneyo kulo nyaka ka-2010, ndikhankanye ukuba ndiyathandabuza ukuba i-ESRI izakulinga ukwenza inguqulelo enegama elingu-9.4, kwaye, eneneni, kuye kwavakaliswa ukuba ingxelo elandelayo izakubizwa ngokuba yiArcGIS 10, kwaye izakufumaneka kwi isemester yesibini ka-2010. Kwizithuba ezininzi ...
Bentley Systems ESRI GvSIG OS GIS asibonise QGIS
uDig, ukuqala ukucinga
Phambi kokuba siqwalasele ezinye izixhobo zomthombo ovulekileyo kwindawo ye-GIS, phakathi kwazo i-Qgis kunye ne-gvSIG, ngaphandle kweenkqubo ezingahlawulelwayo esizamile ngaphambili. Kule meko siza kuyenza nge-GIS (iDig) ye-Intanethi elungele ukuSebenzisa uMsebenzisi, enye yezo zingena kwi-PortableGIS. Apho uDig evela khona kukwakhiwa ...
Acer balangazelela Dgn Dwg GPS ingca GvSIG OS KML GIS asibonise umbono yam yokuqala QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, Ukuprinta kokuqala, UDig
I-Geofumed: imigca engama-48 emnyama nemhlophe
Ukuvala lo nyaka, obunee-flavour ezininzi ezingaqhelekanga, ndininqwenelela kuphela u-2011 omyoli apho sizakuba nokuninzi sokwenza. Kulabo bafunda le bhlog ngaphezulu kwama-299 amangenelo, esi sithuba siphelile, kwabo bangakwenziyo, phantse imigca engama-50 ichaza ubugcisa bokutshaya ngolonwabo. Itekhnoloji ye-GIS / CAD (8):…
Acer balangazelela Blog Dgn Dwg ESRI Umhlaba ka-Google GPS GvSIG OS GIS asibonise egeomates My
egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Egeomates: 2010 Iziprofeto: GIS Software
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kubushushu becafé de palo eyenziwe ngumamazala wam, besenza umboniso malunga neendlela ezibekelwe u-2010 kwindawo ye-Intanethi. Kwimeko yendalo esingqongileyo, imeko imile ngakumbi (ndingatsho ukuba iyadika), kuninzi koku sele kuthethwe phakathi ...
AutoDesk Bentley Systems 3D civil Dgn Dwg ESRI Umhlaba ka-Google ingca GvSIG OS KML GIS asibonise egeomates My
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google umhlaba / imephu, GvSIG, GIS asibonise, Microstation-Bentley, egeomates My, qgis, UDig
Le yiposi yam yokugqibela
Emva phantse kweminyaka emithathu yobukho beBhlog yeGofumadas, ukungena kwe-813 kunye nezimvo ezingama-2,504, emva kwenyanga enzima yeemeko zoxinzelelo, kubonakala ngathi yonke into iyaphela. Obu bomi bunje, zonke iinkanuko zihlala zezexeshana, kwaye le ibonakala ngathi iphelile. Phakathi kwemiba endigcine ndixakekile emva kwam ...
Bentley Systems Blog GIS asibonise egeomates My
Hlanganisa imephu kunye neetafile ze-Excel
Ndifuna ukudibanisa itafile ye-Excel kwimephu kwifomathi ye-shp. Itafile iya kuguqulwa, ke andifuni ukuyiguqula ibe kwifomathi ye-dbf, okanye ndiyibeke ngaphakathi kwisiseko sedatha. Umthambo olungileyo wokubulala ukuzonwabisa kwale holide kwaye ngendlela ujonge iArcGIS 9.3 kwiAcer Aspire ...
Acer balangazelela GIS asibonise shp
ArcGIS-ESRI, GIS asibonise
Amanqanaba omgangatho kunye ne-GIS eninzi
Ukuvavanya okwenziwa zii-GIS ezininzi ngeemodeli zedijithali, ndiye ndafumanisa ukuba into yokudlala yenza okungaphezulu kunoko sikubonileyo ukuza kuthi ga ngoku ngokulawula indawo elula. Ndizakusebenzisa njengomzekelo imodeli esiyenzileyo ekusebenziseni izitrato nge-Civil 3D. Ukungenisa imodeli yedijithali Kolu luhlu yidonki enamandla, ...
AutoDesk ESRI GIS asibonise
GIS asibonise, Topography
Ixabiso le software
Ixabiso lisebhokisini, indleko kwinkuthazo yethu, into eluncedo ekusebenziseni esikunikayo, ixabiso ekuxabiseni kwethu. Lo ngumba o-ethe-ethe kakhulu, kuxhomekeke kwinqanaba lokuba ngubani othethayo, wenza ntoni kwaye ngubani ohlawula iindleko zakhe; Ngokuqhelekileyo sidibanisa ukuba isoftware ixabisa ...
Bentley Systems Blog ESRI Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise
Ukuthelekisa isofthiwe ye-GIS yokuhlola
Ngubani ongafuniyo ukuba netafile ethelekisa iintlobo ezahlukeneyo zesoftware ye-GIS kunye nokusebenza kokuphonononga ukuze wenze isigqibo malunga nokuthengwa. Ewe, into enjalo ikhona kwiPhuzu lokuQala, kubandakanya abavelisi bokusetyenziswa okuthandwayo njenge-AutoDesk, i-ESRI, iMapinfo, i-Intergraph, kunye nabavelisi bezixhobo ezinje ngeTopcom, Leica kunye ...
ArcView AutoDesk 3D civil ESRI GPS Magazines GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GPS / Izixhobo, GIS asibonise, Topography
I-Global Mapper, esebenzisana ne-dgn
Ukufunda ifomathi ye-dgn ngumgangatho kwiinkqubo ezininzi ze-GIS / CAD, kodwa uninzi lwezi (kubandakanya iManifold GIS kunye ne-gvSIG) zishiyiwe zifunda ifomathi ye-V7. I-AutoCAD kunye neArcGIS sele ikwenzile oku. Masibone ukuba yenza njani i-Global Mapper: 1. Funda i-dgn V8 Inomdla, ukuba iifayile zinako ...
Dgn GvSIG OS GIS asibonise
Layisha imephu yezitalato ukusuka kwiGoogle Earth
Ngokwazi kwethu, akukho nkqubo (okwangoku) enokukhuphela iGoogle Earth ezitratweni kwifomathi yevektha. Nangona unako ukusukela kwiiMephu zeSitrato esiVulekileyo, ilusizi ukuba azikho zonke izixeko. Kodwa ukuba umntu wayenomdla kwizitrato zikaGoogle Earth, ke indlela yokuphuma kukuzikhuphela njengomfanekiso, emva koko wenze i-vectorize ...
AutoDesk Umhlaba ka-Google GIS asibonise
AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, Microstation-Bentley
Guqula imifanekiso ukuya kwi vector
Ngexesha elithile eladlulayo, iitafile zedijithali yayiziziphumo zokufaka imephu eziprintiweyo, emva koko iskena safika, nangona umsebenzi awusebenzi kwiimephu eziskeniweyo kuphela kodwa ezinye eziguqulwe zangumfanekiso okanye i-pdf kwaye asinayo ifomathi yevektha. Inkqubo endizakuyibonisa isebenzisa iMicrostation Descartes, kodwa ...
AutoDesk GIS asibonise
Uluhlu lweSoftware ndiyifake
Kutshanje bendithetha ngento ekuthethwa ngayo kubalo lwamanani ukuthetha ngesoftware, ngakumbi iinkqubo ezili-11 ezimele ama-50% otyelelo ngegama elingundoqo. Kunzima ukunika iingcebiso ukuba yeyiphi isoftware ebhetele, kuba ixhomekeke kwiimeko ezahlukeneyo zomxholo (kunye nemali), eyona ndinethemba layo kukuba ndibhale kwaye ndinike umbono wam;
Bentley Systems Blog 3D civil Dwg Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise umbono yam yokuqala QGIS
Geospatial - GIS, INDEX, egeomates My
I-GUM ye-Quantum, okokuqala ngqondweni
Eli nqaku lenza uhlaziywa lokuqala lwe-Quantum GIS, ngaphandle kokuhlalutya izandiso; ukwenza okuthelekiswayo kunye ne-gvSIG nezinye izicelo
Dgn GPS ingca GvSIG OS KML kml ukuya kwi dxf GIS asibonise mapserver umbono yam yokuqala shp
Geospatial - GIS, GvSIG, Ukuprinta kokuqala, qgis
Eli ligama elinikwe isenzo sezixhobo ze-GIS zokuphelisa ukungangqinelani kwe-vector kwimikhwa eyamkelweyo ngokubanzi kwi-topology yendawo. Isixhobo ngasinye siphumeze ngendlela yaso, makhe sijonge imeko ye-Bentley Imephu kunye ne-Manifold GIS. Microstation Geographics Microstation ibandakanya izixhobo ezimbini ezifanayo, enye yenziwe ...
Bentley Systems GIS asibonise
GIS asibonise, Microstation-Bentley
Imephu: Izolo, namhlanje kunye mhlawumbi kusasa
ImephuInfo yisoftware esele yenziwa rhoqo njengenye indlela yokhuphiswano kwisizinda se-ESRI. Kuninzi okubhaliweyo malunga nesi sixhobo, ndifuna ukunikezela esi sithuba siphonononge imikhwa endaweni yamandla, athi ngokwe-2008 Daratech Study ivele kwindawo yesixhenxe ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems ESRI GIS asibonise egeomates My
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 9 kwiphepha elilandelayo